Iphrinta yeThemeshi ephansi ephathekayo China Manufacturer
Incazelo:I-T Shirt iphrinta ye-A3,Iphrinta ye-Low Price T Shirt,Iphrinta yeThebula ephathekayo
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-Digital > Iphrinti yeThetile > Iphrinta yeThemeshi ephansi ephathekayo
I-Model No.: RF-A3 T180709
Ukuphumelela Okuphezulu I-Multi-function Fabric Sublimation Printer ithatha ikhanda lokuphrinta le-Epson Original R1390, isinqumo esikhulu sinama-2880dpi. Le Shrinti ye-T ephansi ephathekayo isebenzisa ubuchwephesha bokuqala be- Inkjet, finyelela ukunyathelisa okucacile okuphezulu. Kulula kakhulu ukusebenza futhi usayizi omncane, kulula ukuthwala. I-Low Price T Shirt Printer , ubuncane obuncane be-droplet ye-inki kungaba 1.5pl, sengeza isimiso somjikelezo wenkino omhlophe futhi sizenzekelayo ngokuzenzekelayo. I- Portable T Shirt Printe r isetshenziselwa kakhulu indwangu, indwangu kanye ne-terylene, amaklayenti amaningi asetshenziselwa ukuqala ibhizinisi labo.
Uma kuqhathaniswa nekhono lokunyathelisa lendabuko, i-RFC digital flatbed printer ikusiza ukuthi ulondoloze ukunyathelisa kwesikrini, ukunyathelisa ukushisa ukushisa kanye nezinye izinqubo zendabuko eziyinkimbinkimbi yenkambinkimbi, ihlukana nokunciphisa umbala wendwangu yendabuko, lo mkhakha uthatha ukukhiqizwa kwemishini, ukunciphisa izindleko zomsebenzi , inqubo yokunyathelisa yezindleko eziphansi, ukukhiqizwa okuphezulu, ukulahla okuphansi, imikhiqizo ephakeme ephelile izuzwe ngempela! Ingaveza isithombe sombala wesithombe kunoma yikuphi okubonakalayo, okumibalabala, okugqoke ukugqoka, okungahambisani nokuqeda, ngaphandle kokwenza ipuleti, inkululeko yombala, ukunyathelisa okukodwa kanye nezinye izici ukusheshisa inqubo yedijithali embonini yokunyathelisa, ukukhiqiza okukhulu okuphelele nokukhiqiza isevisi ye-100% emva kokuthengisa.
I-T Shirt iphrinta ye-A3
I-T Shirt iphrinta ye-A3 Iphrinta ye-Low Price T Shirt Iphrinta yeThebula ephathekayo I-T Shirt iphrinta yeCotton I-T-shirt iphrinta ye-Diy I-T Shirt iphrinta CMYKW I-T Shirt iphrinta ye-DX5 Inhloko I-Carton T Shirt iphrinta